Lọ ọrụ Mwepu Nwepu | Ndị na-emepụta ngwaahịa na ndị na-ebubata ngwaahịa na-ere ahịa
Disposable ogologo uwe ogwugwo iche gown emeputa
Ngwaahịa anyị siri ike ma sie ike, na-enwe ike ịnagide ịrụsi ọrụ ike ma ka na-enwe ume iku ume na mgbanwe. Emere ha nke ihe otutu multilayer di fechaa iji kwado nguzogide mmiri. Ezubere iji daba ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwere ụdị, etinyere akwa na akwa ya iji weta nkasi obi na mgbanwe n'otu oge.
Hot ire bule waterproof disposable ogologo aka uwe + Pee iche iche uwe
anyị disposable Mwepu Gowns na-mere nke ukwuu oru oma nzacha echebe ihe. Ha bụ kọmpat ke Ọdịdị na ike n'ụzọ dị irè na-egbochi mmiri na particulates. ma ọ nwere ezigbo nkasi obi, gbanwee mgbatị ahụ n'úkwù ya na eriri roba Loose style design iji zute ọrụ gị dị iche iche!
acha anụnụ anụnụ High Quality ọgwụ disposable gown iche gown Supplier
Ngwaahịa a bụ uwe nwere ike iwepu na-acha anụnụ anụnụ nwere ogo 50gsm. Ihe omuma bu Polyester. Ọ nwere ezigbo mmiri mmiri na-eguzogide. Ngwaahịa a nwere ngwakọta na-agbanwe agbanwe yana akwa mgbatị dị n'úkwù, nke a ga-eme nke ọma maka ndị nwere ụdị ahụ dị iche iche.
Nhọrọ kacha mma mkpofu ahụike iche iche na-emepụta ihe
A na-emepụta ngwaahịa anyị dịka usoro ngwa ngwa ahụ si dị. A na-emezi ngwongwo nke ngwaahịa ahụ iji mee ka ha nwekwuo nchebe na nchekwa wa eriri na-agbanwe agbanwe na-eme ka anyị nwekwuo mgbanwe ma dị mfe na-arụ ọrụ.